जापानबाट फर्किदा के गिफ्ट लाने भनेर रनभुल्ल हुनु भएको छ ? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > जापानबाट फर्किदा के गिफ्ट लाने भनेर रनभुल्ल हुनु भएको छ ?
घुम्न जादा पर्यटकहरुले दुइ प्रमुख चिज लिएर घर फर्किन्छन फर्किन्छन। ति हुन् फोटो (पिक्चर) र सुभेनिअर अर्थात् कोशेली। आफ्नो लागि होस्, परिवार वा साथीहरुको लागि होस्, सुटकेसमा पक्कै पनि उनीहरुको लागि यादगार बन्ने केहि न केहि कोसेली पक्कै हुने गर्दछ। यी गिफ्ट साना हुन् वा ठूलो, महँगो हुन् वा सस्तो, हजुर घुम्न गएको ठाउको विशेसता बोकेको हुदछ।
टोकियोमा यी सामन किन्ने ठाउको कुनै कमि छैन। सामान किन्न यहाँ धेरै मल र स्टोरहरु छन्। यहाँ यति धेरै पसल छन् कि, देख्दा क्युट लाग्ने सामानहरु सबै किन्न मन लाग्दछ। मेरो परिवारमा जापान पहिलो चोटी म नै आएको हु। त्यसैले मा यहाँबाट फर्किदा सबैले केहि न केहि आश गरेर बस्नु भएको हुनेछ। म भर्खरै कलेज सिद्याएर यहाँ आएको हुनाले सोचेर मात्र खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ।
तर मैले आफ्नो टोकियोको बसाईमा युनिक र सस्तो गिफ्ट किन्ने तरिका थाहा पाएको छु। आज म हजुरहरुलाई यहि ट्रिक बताउन गैरहेको छु। मजाको कुरा यो गिफ्ट लिने ठाउ जापानमा जताततै छ।
यसलाई जापानमा “घचा” भनिन्छ। यो एक प्रकारको भेण्डिङ्ग मेसिन हो। यो मेसिन हजुरले ट्रेन स्टेसन, मल, सबवे, कम्बिनीमा पाउन सक्नु हुनेछ। १०० यन – ४०० यनमा हजुरहरुले यी मेसिनबाट सा-साना जापानको युनिक क्यारेक्टर गिफ्टहरु किन्न सक्नु हुनेछ। यी क्यारेक्टरहरुमा आनिमे फिगर, कर्बि, डीजनि, डाईनोसर, एभेन्जर क्यारेक्टर, टोए फुड, जापानिज कार्टुन क्यारेक्टर किन्न सक्नु हुनेछ। सबैको लागि पक्कै हजुरले केहि न केहि युनिक भेट्नु हुनेछ। यी आईटमहरु ठाउँ ठाउँमा फरक हुने हुनाले घुम्दै खोज्दै लिन रमाइलो हुदछ।
विदेशमा पनि यस्ता मेसिन हुने गर्दछन। तर जापानको जति टोएको भेरिएसन भने हुने गर्दैन। जापानका केही पुराना क्यारेक्टरहरु जस्तै सुमिको गुराशी, सेलर मूनको पनि टोएहरु यी “घचा”मा पाईन्छ।
यी मेसिनमा हुने रमाइलो कुरा चाहि यसमा हजुरले कोईन हाल्नु पर्दछ। त्यसपछि एउटा बटम घुमाउनु पर्दछ। अनि आफुले चाहेको टोए आओस भनेर पर्खिनु पर्दछ। यो पर्खाईले हजुरलाई बच्चाको झैँ अनुभूति दिनेछ।
मैले यो मेसिनबाट दुइ वटा टोए किनिसकेको छु। एउटा “शिवा इनु चार्म”(बिरालो) र अर्को चाहि सुमिको गुरासीको पोलार बिएर। यी दुवै मेरो डेस्क वर्कमा राखेको छु। बिरालोले लगाउने टोपी पनि किन्न पाईने हुनाले पछि मेरो साथिको लागि त्यो किन्ने छु। अनि अरुहरुको लागि पनि थुप्रै सामान किन्ने सोचमा छु। जापानको बसाई भरमा थुप्रै किनी सक्ने छु होला। >